Zimbabwe demonstrators mob aid project handover - The San Diego Union-Tribune
A baby takes time to play among the group of Movement For Democratic Change supporters who sought refuge at the party headquarters in Harare, Friday, Feb, 4, 2011. The group consisting of over 80 MDC party supporters were attacked from their homes by suspected Zanu pf supporters in Harare and other parts of the country. According to independent media reports Zimbabwean Prime Minster Morgan Tsvangirai has confronted President Robert Mugabe over politically motivated violence and intimidation allegedly perpetrated by Zanu pf supporters. Zimbabwe is set to hold elections later in the year amid fears of vote rigging and political violence(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A baby takes time to play among the group of Movement For Democratic Change supporters who sought refuge at the party headquarters in Harare, Friday, Feb, 4, 2011. The group consisting of over 80 MDC party supporters were attacked from their homes by suspected Zanu pf supporters in Harare and other parts of the country. According to independent media reports Zimbabwean Prime Minster Morgan Tsvangirai has confronted President Robert Mugabe over politically motivated violence and intimidation allegedly perpetrated by Zanu pf supporters. Zimbabwe is set to hold elections later in the year amid fears of vote rigging and political violence(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi) (/ AP)
Movement For Democratic Change supporters and their families take refugee at the party's headquarters in Harare, Zimbabwe, Friday, Feb, 4, 2011. The group consisting of over 80 MDC supporters say they were attacked in their homes by suspected Zanu PF supporters in Harare and other parts of the country. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Movement For Democratic Change supporters and their families take refugee at the party's headquarters in Harare, Zimbabwe, Friday, Feb, 4, 2011. The group consisting of over 80 MDC supporters say they were attacked in their homes by suspected Zanu PF supporters in Harare and other parts of the country. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi) (/ AP)
A group of Movement For Democratic Change supporters take refuge at the party's headquarters in Harare, Zimbabwe Friday, Feb, 4, 2011. The group consisting of over 80 MDC party supporters were attacked from their homes by suspected Zanu pf supporters in Harare and other parts of the country. According to independent media reports Zimbabwean Prime Minister Morgan Tsvangirai has confronted President Robert Mugabe over politically motivated violence and intimidation allegedly perpetrated by Zanu pf supporters. Zimbabwe is set to hold elections later in the year amid fears of vote rigging and political violence(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi) (/ AP)
Britain has sent a formal diplomatic complaint to Zimbabwean authorities protesting harassment of a diplomat and attempts by President Robert Mugabe's party supporters to disrupt the handover of a British aid project, officials said Friday.